lsasrv.dll error ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ဇင်​မျိုး "Lsass.exe Unable to Locate Component (​အဲ​ဒါ​က​ခေါင်း​စဉ်​ပါ) The Application has failed to start b/c lsasrv.dll was not found. Re-installing may fix the prb"
​ကဲ ​ညီ​လေး​ရေ . ​အစ်​ကို​က​တော့ live cd ​ကို ​တင်​ထား​ပေး​ပြီး​သား​နော် . ​မ​သိ​သေး​ရင် ​ဒီ​မှာ ​သွား​ဖတ်​လိုက်​ပါ . ​အဲ့​ဒီ့​ပို့စ်​မှာ ​တင်​ထား​တဲ့ Live cd ​ကို Download ​လုပ်​ပြီး​တော့ CD burn ​လိုက်​ပါ . Burn ​လိုက်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ငါ့​ညီ ​အဲ့​ဒီ့ CD ​ကို ​ငါ့​ညီ​စက်​ထဲ​ကို ​ထည့်​လိုက်​ပါ . ​ဘယ်​လို​အ​လုပ်​လုပ်​တယ်​ဆို​တာ​ကို​တော့ ​အဲ့​ဒီ့​ပို့စ်​မှာ ​ရေး​ပေး ​ထား​ပြီး​သား​ပါ . ​ကဲ live cd ​လဲ​ရှိ​ပြီ . window ​လဲ ​တက်​လာ​ပြီ​ဆို​ရင်​တော့ ​အောက်​က ​တင်​ပေး​ထား​တဲ့ isasrv.dll ​ဖိုင်​ကို copy ​ကူး​ပြီး​တော့ ​အောက်​က root ​ထဲ​မှာ ​ကူး​ထည့်​လိုက်​ပါ .
​အဲ့​ဒီ့​ထဲ​ကို ​ထည့်​ပြီး​တာ​နဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို restart ​ပေး​လိုက်​ပါ . live CD ​ကို ​ပြန်​ပြီး​တော့ ​ထုတ်​ထား​လိုက်​ပါ . ​အောက်​မှာ ​ထည့်​ရ​မယ့် isasrv.dll ​ဖိုင်​ကို ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် .
punisher March 3, 2010 at 12:28 AM
​အစ်​ကို​ရေ ​ကျွန်​တော့်​ကို ​ကူ​ညီ​ပါ​ဦး ​ကျွန်​တော့်​စက် virus ​ကိုက်​တာ D ​ထဲ​မှာ ​ရှိ​တဲ့ file ​အ​ကုန်​လုံး .dll file ​ပုံ​စံ​ဖြစ်​သွား​တယ် double click ​လိုက်​ရင် ​သူ​က​ကောင်​မ​လေး​တစ်​ယောက်​ရဲ့​မွေး​နေ့​ကို ​မေး​တယ် ​မှန်​ရင် virus ​က ​သူ့​ဘာ​သာ​သူ ​သတ်​သေ​မယ် ​မ​မှန်​ရင် ​စက်​ကို ​ပိတ်​ပစ်​မယ်​လို့ ​ပြော​မယ် ​ကျွန်​တော် format ​ရိုက်​ပြီး window ​ပြန်​တင်​တော့​လည်း ​အဲ​ဒါ​က ​မ​ပျောက်​ဘူး ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ ​ပြော​ပြ​ပေး​ပါ​ဦး